Xafiiska Arimaha Dibadda ee UK ayaa soo saaray digniinta safarka ee Bolivia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Xafiiska Arimaha Dibadda ee UK ayaa soo saaray digniinta safarka ee Bolivia
Bolivia Wararka Jebinta • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Faallo • Wararka Dowladda • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
The Xafiiska Arimaha Dibadda ee UK ayaa cusbooneysiisay talooyinkeeda safarka Bolivia, ka dib toddobaadyo mudaaharaadyo rabshado wata, si looga digo dhammaan safarrada aan muhiimka ahayn ee lagu tagayo waddanka oo dhan, iyadoo leh “xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo aad looma hubo guud ahaan Bolivia ka dib iscasilaadii madaxweynaha Evo Morales 10kii Nofeembar ... doorashooyinka lagu murmay Oktoobar ”.
Talada la siinayo muwaadiniinta UK ee haatan ku sugan Bolivia ayaa ah inay la xiriiraan shirkadooda diyaaradeed ama shirkada socdaalka ka hor inta aysan u ambabixin garoonka diyaaradaha, si loo xaqiijiyo in duulimaadyada lagu wado inay duulaan, ka dib hakad ku yimid todobaadyadii la soo dhaafay duulimaadyada iyo helitaanka garoomada diyaaradaha, oo ay ku jirto El Alto gudaha La Paz. Socdaalayaasha waxaa sidoo kale loogu baaqay inay "ka fogaadaan dad fara badan iyo banaanbaxyada dadweynaha, ha isku dayin inaad ka gudubto xayiraadaha, isla markaana aad ugu fiirsada waxyaabaha soo kordha iyadoo la adeegsanayo warbaahinta maxaliga ah iyo talooyinka socdaalka".
Dibadbaxyada qaar waxay keeneen rabshado ka dhacay La Paz iyo magaalooyin kale oo waawayn, FCO-na waxay ka digeysaa in "mudaharaadyo dheeri ah ay u badan tahay inay dhacaan waqti gaaban waxaana laga yaabaa inay rabshado isu bedelaan digniin la'aan"
Basaska ka dhex shaqeeya magaalada ayaa la weeraray taas oo keentay in FCO ay soo jeediso dadka safraya inay ka fogaadaan waddooyinka magaalooyinka dhexdooda ah halka ay suurtagal tahay. Safrayaashu waa inay sidoo kale ogaadaan in safarada wadooyinka iyo xuduudaha dhulka ay u egtahay inay qaadan doonaan waqti ka dheer intii la qorsheeyay, xuduudaha dhulka ayaa lagu xiri karaa ogeysiis gaaban.
Socotada safarada qorshaystay, iyo kuwa horeyba wadanka u joogay, waa inay hubiyaan caymiska caymiska.
1,134,000 ajaaniib ah oo yimid Bolivia sanadkii 2017, 40,106 waxay ahaayeen British, sida laga soo xigtay FCO. Shirkadaha socdaalka ee ka shaqeeya gobolka waxay kula talinayaan safrayaasha ku sugan dalka gudihiisa iyo safarada la qorsheynayo inay sida ugu dhaqsaha badan ula xiriiraan si ay ugala hadlaan fursadaha kale.